Soo dejisan Glary Utilities 5.61 Standard iyo Pro – Vessoft
Soo dejisan Glary Utilities
Glary Utilities – set oo ah qalab si astaysto, nadiif ah oo ay tayadoodii nidaamka qalliinka. software wuxuu ka kooban yahay dhowr ah qalab loogu talagalay gacanta ku computer, ayna tagin ee xasuusta iyo diiwaanka. Glary Utilities waa ay awoodaan in ay uninstall software ah, soo celin faylasha ah, sir iyo decrypt xogta. Sidoo kale software kuu ogolaanaya in aad kala qaybsan oo ku milmaan ee files badan, raadi nuqul ka mid ah faylasha, tirtirto files ka complitly. Glary Utilities uu leeyahay interface a fudud oo dareen leh.
Aasaasidda ee nidaamka qalliinka
Correction oo ka mid ah khaladaad nidaamka diiwaanka
Maareynta agabka xawaaladaha
Comments on Glary Utilities:
Glary Utilities Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Camtasia Studio 8.6.0.2079